Solution kuMvumo yakaramba dambudziko E: [pulseaudio] main.c: | Linux Vakapindwa muropa
PulseAudio is a multiplatform mutsindo server nekwaniso yekushanda pamusoro pemambure. PulseAudio inoitirwa kuve kutsiva iyo Yakajekeswa Inzwi Daemon server., iyi server ine ruzha yakawanikwa mukati mezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux uko kwakawanda kwakachinja Alsa kwaari.
Mushure mekunge ndaisa nekugadzirisa Voyager 16.04 GS pakombuta yangu yedesktop, Ini ndaive mumasetings ekupedzisira saka ndinogona kugara pasi ndichiita mutambo weRe6 murunyararo kana ndiri kusangana nekanganiso inotevera "Dhairekitori repamba harisvikike: Mvumo yaramba".
Zvinoshamisa kuti ndaive neodhiyo, dambudziko raigona kuiswa parutivi, asi zvinosuruvarisa kuti ini ndaida kunakidzwa nemumhanzi zvakare, saka wangu Spotify mutengi anga asiri kutamba chero odhiyo, ndipo apo Ini ndaifanirwa kuisa ruoko rwangu kugadzirisa izvi.
Kana iwe uri pano imhaka yekuti une dambudziko rakafanana, sezvo odhiyo icon yaingove mu "Mute" uye ini handina kukwanisa kudzima iyi mamiriro ezwi, mune dzimwe nguva ivo vaingova vasina odhiyo.
1 Tarisa odhiyo marongero
2 Dzorerazve Pulseaudio
3 Tarisa mvumo
Tarisa odhiyo marongero
Chinhu chekutanga chandakaita kuenda kune ekuteerera marongero, ayo mune ino kesi pavucontrol ndiye anozvitarisira, asi ini ndakawana iyi mhinduro.
Imwe yemhinduro dzakareruka, iri kungotanga iyo pulseaudio daemon, sezvo yakamiswa, kune izvi isu tinofanirwa kuvhura terminal nekuteedzera unotevera kuraira:
Mune yangu kesi ndakawana mhinduro inotevera:
Kana tikaziva maarikumufananidzo vanondikurudzira kuti ndiite rairo rinotevera, saka iyi imwe mhinduro:
Nehurombo kuti handina kuwana mhinduro yakanaka, ndakawana zvinotevera:
Dambudziko rakaramba riripo, ipapo Ndakaenderera kudzorera pulseaudio:
Kuti uite izvi, shandisa inotevera mirairo:
Pano komputa iri kuzotangazve, mushure mekutanga zvakare ndakavhura terminal zvakare ndokuisa pulseaudio zvakare:
Mukati yemhinduro dzandakawana pamambure, isu tinofanirwa kugadzirisa inotevera faira:
Uye wobva watsvaga inotevera tambo, autospawn =, chero chipi zvacho chatinacho, tinochidzima uye chinofanira kuita seichi:
Isu tinongofanirwa kutanga daemon zvakare, mune dzidziso inofanirwa kushanda, asi kwete kwandiri,
Ndakawana mhinduro inotevera:
Zvino kwete chete iro dhimoni risina kutanga, asi ikozvino akange asina mvumo. Zvino ini ndaifanirwa kuenderera kugadzirisa dambudziko remvumo, nekuti izvi tinofanirwa kuita zvinotevera mune chinouraya.
Yokutanga ndeye ita shuwa kuti mushandisi wedu anokwanisa kuwana kune odhiyo boka kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuita unotevera kuraira:
Iko kwaunotsiva mushandisi wako nemushandisi wauinayo muhurongwa, mune yangu mamiriro zvinoita kunge seizvi:
Ini ndinowana mhedzisiro yakafanana, yekupedzisira nzira yandaishandisa yaive yekugadzirisa mvumo kune yangu Kumba dhairekitori, Ini ndangoramba ndichichinja mvumo yangu yefaira zvinotevera.
Zvimwe zvibvumirano zvinogamuchirwa zvinosanganisira 750 kana 700.
Izvo hazvikurudzirwi kushandisa iyo -R Sarudzo kunyangwe ese maforodha uye mafaera mukati me $ HOME dhairekitori inowanzo kuve yemushandisi, iyo yega dhairekitori iyo inoda kuti ive neyakagadziriswa chivakwa kuti ibvise iyi kukanganisa i $ HOME folda.
Tinogona kumhanyisa uyu murairo se "sudo chown -R username: zita rekushandisa / imba / zita rekushandisa" kana iwe uchida kuona kuti zvese zviri mumba mako ndezvako neboka rako rekushandisa.
Zvino ini ndangobuda musystem ndikazvitanga futi, ndakaedza kekupedzisira:
Nemhedzisiro yakanaka, odhiyo yesystem yangu yaive yatogoneswa uye nekuvandudzwa mune odhiyo. Kana imwe yemhinduro idzi yaikunakira, usazeze kugovana nesu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mhinduro kuMvumo yakaramba dambudziko E: [pulseaudio] main.c:
Kwakanaka, mushure memateedzero akati wandei, iyi ndiyo yega yakandibatsira, ndatenda nekwaziso kubva kuArgentina.
Kutonhora! mushure mekutsvaga kwakawanda ndakashandisa rubatsiro urwu uye rwakandishandira! Ndatenda
Makaponesa hupenyu hwangu !!! Ndatenda
Ini ndaive nedambudziko rakafanana ndichishandisa Ubuntu 18.04. Pakarepo kurira kwakanyangarika uye hapana kwandingawane mhinduro, ndakaedza zvinhu zvakawanda uye ichi chidzidzo chete chakandishandira, ndinokutendai zvikuru nekukorokotedza, maita basa rekugovana.